वीपीको सपनामा कांग्रेसको व्यापार – TajaNepal
Home /Blog/वीपीको सपनामा कांग्रेसको व्यापार
वीपीको सपनामा कांग्रेसको व्यापार
काठमाण्डौ । नेपाली राजनितीका आदेश पुरुषहरुले सत्ताको रजाइ धेरै गर्न पाएनन् । कांग्रेसका वीपी कोइराला कांग्रेसका मात्र बनाइए । उनका भाई गिरिजा भ्रष्टाचारमा सर्वाेकृष्ट पदकधारी बनाइए । उनका आर्थिक सारथी थिए एडिबी विश्व बैंक अन्र्तराष्ट्रिय मुद्राकोषका एजेन्ट डा राम शरन महत । यीनै महत हुन शानेवानीलाई सुजाता लगाएर टाट पल्टाउने चल्दै गरेको साझा बस, यातायात कार्यालय, ट्रली बस, रोप वे, वीरगंज चिनी, बाँसवारी छाला जुत्ता, भृकुटी कागज, हरिसिद्धि इट्टा, तत्कालीन बन्द हाल सुचारु औषधी लिमिटेड, कृषि औजार कम्पनी, वीरगंज चिनी, जनकपुर चुरोट कारखाना लि, नेशनल ट्रेडिङ्ग हिमाल सिमेन्ट जस्ता थुप्रै उद्योग कारखाना बन्द गराउने । यस्ता राष्ट्र घाती देशद्रोही अहिले पनि कांग्रेसका आर्थिक विज्ञ छन् । कांग्रेसको आर्थिक नीति सप्रन्छ कसरी ?
सधै वीपीको सपनाका व्यापार गरेको त्यो कांग्रेसमा उदाएको युवापुस्ता गगन थापा प्रदिप पौडेल धनराज गुरुङ्ग, रामहरि खतिवडाको आर्थिक हैसियत र कामनपाका पूर्व वडाध्यक्ष बागबजारको गणेश खड्कीको हैसियत हेर हुन्छ । समाजवादी कांग्रेसको वीपीको सपनाको व्यापार ? गणेशमानका चेला खडकी फुटपाथमा छन् । उनी कांग्रेस हुदाँ न त गगन जन्मिए न त बलबहादुर राईको हस्ताक्षर चोर्ने रामहरि चर्चामा थिए न त अमीर गरुङ्ग (हाल एमाले प्रदेश १ का संसद) को योजनामा रातो पासर्पाेट बेचेर लम्जुङ्गका रामचन्द्र अधिकारीको राजनीति माटोमा मिलाउने बहादुर धनराजको सक्रियता थियो ।
अपराधीहरु बढी कान्तिकारी हुन्छन् । कांग्रेमा शेरबहादुरले पार्टी नेतृत्व लिनु र यी नामका स्वनामधारीले पार्टीको चिन्ता गर्नु एकै हो । गगनले कसरी खाए कृषि व्यापार आयोजनाको पैसा ! उसले मासु पसल खोल्दा प्रचार हुने कांग्रेसकी एक परियार सासद महिलाको ड्रेस (ब्लाउज, म्याक्सी पेटीकोट) सिलाउदा सासद भईन भनेर व्यग्य गर्ने यही गगनको टीम हो । यस्तो कांग्रेसले कसरी पार्टी जीवन सच्याउछ ? विदेशमा कार्यक्रमहरुमा जादा नेपाली युवाहरुसँग मनग्गे खाने यी युवाहरु आज आदेश दिने भएका छन ? यस्ताले सप्रिन्छ पार्टी ।
शेरबहादुर साढे भएको कारण यही हो जसले एडिवी, विश्व बैंक अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको दलाली गरेर सत्तामा रमायो । जनताको हितमा सिन्को भाँचेन र बेरोजगार बढायो लोड सेडिङ्ग चम्कायो । कांग्रेस विचार कार्यक्रममा होइन गुटको खेती गर्दै छ । जहाँ रामचन्द्र पौडेल जस्तालाई नेता मान्नेहरु अब श्रीमती र छोरा मात्र हुदैछन । नेपाल आफैमा असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्छ । तर शेर बहादुर फ्रि तिव्वत धारीका ग्य्राण्ड फादर हुन । प्रकाशमान सिंह नरहरि आचार्य गगन थापा कृष्ण सिटौलाको कदबाट पैसाका लागि कसरी सकृय हुन्छन ? यो खुला समाजमा पनि खोतल्नु जरुरी छ ? कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा एक झुण्डमा छन् उनीसँग भारतीय दलाल विमलेन्द्र छन् । रामचन्द्र अब एक्लो वृहस्पति भइ सके यीनको पछाडि मान्छे थिए भने गोविन्दको विरुद्ध आफै उजुरी गर्न अदालत जानु पर्दैनथ्यो । वीपिको नाउमा वदनाम पूत्र डा. शसाङ्क छन् । जो दीपक गिरी जस्तो शुद्ध तस्करको योजनामा चल्छन् अर्का वदनाम खुमबहादुरको अभावमा टुहुराहरु छन् यीनको संरक्षक शेरबहादुर हुन् । कृष्ण सिटौलाको टीममा चोर माथि चकारहरु थुप्रिदै छन् । यीनले सत्ताशक्ति भनी हेर्छन् । यही टीममा हुन प्रदिप, गगन, धनराज ।
आफू सत्ताको रजाई गर्दा देशमा प्रजातन्त्र मात्र देख्ने व्यवहारमा भ्रष्ट व्यभिचारी बलात्कारीहरुलाई साथमा लिदा वीपिको सपना भन्नेहरुको हैसियत कहाँ कति रहन्छ ? कांग्रेसले गरेको आर्थिक प्रगति कहाँ छ ? बुढानिलकण्ठ दरवार बोहराटार दरवार टोखा दरवार ? गणेश खड्की आर्थिक रुपमा कति सम्पन्न भए ? २०१७ सालमा बम बोकेर हिड्दा हात गुमाएका शिव कंगालको दैनिकी सुधार्न आर्थिक क्रान्तिका नायक एडीवी विश्व बैंकका दलाल डा. रामशरणले गरिवी उन्मुलनको नीति ल्याएको भए चुनावमा नुवाकोटको कागती गाउँबाट खेदीनु पथ्र्यो ?